Investment Nkedo Foundry, Steel Investment Nkedo - Yungong
Mgbapụta valvụ Parts
Ngwa nri igwe
Mining Machinery Nkedo
Ihe nkedo akụrụngwa
Ngwá Ọrụ Ahụike
Ihe ngosi ngosi anyi
ZKJB-300 Agụụ igwekota Series
Akụkụ nke igwekota agụụ anyị na-adabere n'ụkpụrụ ụwa na ijikọta njirimara nke ụlọ ọrụ nhazi ngwa ngwa nri.
Dị ka mkpa gị si dị
họrọ ọkacha mmasị gị na ngwaahịa
Ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe etinyere na Valves nfuli impellers anwụrụ oyiyi akwa,
akụrụngwa akụrụngwa, igwe nri, ngwa igwe, ngwa ọrụ ngwaike yana ịchọ mma ọla.
Mgbapụta & valvụ akụrụngwa ...
Plumbing fixtures na Pipe ...
Igba Steel nozulu
Metal ntoonu tube decomp ...
Mgbapụta Fittings Cas ...
Ngwa na: An impeller ...
Ulo oru eji eme ihe na ...
Ngwaọrụ Ahụike Ca ...
Ha bụ ihe dị mgbagwoju anya ...
OEM Marine itinye ego ...
Anyị nwere ike inye ego c ...
Hardware mgbatị ...
Metal mma ihe: ...
Nkenke mgbatị ...
Ngwa nri igwe —— packi ...
Nkedo maka Fire ...
A na-arụpụta ihe niile ...
Uru nke nkenke ...
Metal amata tube
Accessgbọ mmiri Ngwa
Mgbapụta valvụ Ndenye njikọ
Emi odude ke Xingtang County aku na uba na-emepe emepe mpaghara, Shijiazhuang City, na mpaghara nke 40000 square mita na ihe karịrị 300 ndị ọrụ. Ọ bụ teknụzụ teknụzụ na - ejikọ R & D, imewe, nrụpụta, ire ahịa na ọrụ aka ọrụ.
The ụlọ ọrụ na-tumadi aku nkenke mgbatị na nri ígwè n'ichepụta. Investment mgbatị usoro bụ sịlịkọn Sol, na-enwe kwa afọ mmepụta nke banyere 3000 tọn oge ọgbụgba.
Kedu ihe ndị nwere ike imetụta ogo nkedo maka ndị na-emepụta mgbatị ígwè?
Ọnwa Ise / 06/2021
Ogo nke ọgbụgba ahụ nwere mmetụta dị ukwuu na akụrụngwa akụrụngwa, dị ka ihe ọkụkụ nke nfuli dị iche iche, nha nke oghere dị n'ime akụkụ nke akụkụ hydraulic, shei a haziri ahazi, izi ezi nke usoro ịkpụzi na oke ike, wdg. Nsogbu ga dir ...
Nkenke mgbatị emepụta kọwaa usoro nke silica Sol mgbatị zuru ezu!
Ugbu a ulo oru mbo nkenke mgbatị usoro na-emepe emepe ngwa ngwa, na ọ na-ewu ewu n'ihi na nke na-atọ na-ọcha na ọdịdị. Dị ka usoro dị ugbu a, akụkụ ndị mepụtara site na nkedo nkenke n'ọdịnihu ga-abawanye ụba. ...
Importantfọdụ dị mkpa nzọụkwụ nke mgbatị usoro na nkenke oge ọgbụgba!
Nkenke mgbatị bụ a nkịtị mgbatị usoro na ígwè mgbatị emepụta, ma ugbu a mmepe bụghị dị ka nkịtị dị ka ígwè oge ọgbụgba na ígwè oge ọgbụgba, ma nkenke mgbatị nwere ike inweta dịtụ ezi udi na dịtụ elu mgbatị nkenke. Ndị ọzọ comm ...
Atụmatụ ụlọ ọrụ metal na Mpaghara Development Economic Economic na Hebei
Iji gbalịsie ike imeghe ọnọdụ ọhụrụ nke mmepe dị elu nke ụlọ ọrụ foundry na mpaghara anyị, na Machị 24, ndị isi otu mpaghara anyị mere nyocha n'ọhịa gbasara ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ dị mkpa, ụlọ ọrụ nyocha, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na .. .
Basic ụkpụrụ nduzi maka nhicha JR-D120 Oyi kpọnwụrụ akpọnwụ anụ ọma
Jr-d120 bụ ngwa a ma ama, mana mgbe ọ bụla ị na-edozi anụ adịghị ọcha, ihicha dị mkpa iji zere nje na nje site na nnuku. Otú ọ dị, nhicha gị grinder adịghị iche na nhicha ndị ọzọ na-esi nri. Mgbe nke ahụ gasị, ịchekwa ihe ndị mejupụtara ya ga-enyere aka hụ na ọ na-ejigide ya ...